Obsi keenya waanuma gaarii fidaa jira; Yaasoo Kabbabaa Hordofaa, Baga nagaan hidhaa cubbuu keessaa baate! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObsi keenya waanuma gaarii fidaa jira; Yaasoo Kabbabaa Hordofaa, Baga nagaan hidhaa cubbuu keessaa baate!
Obsi keenya waanuma gaarii fidaa jira; Yaasoo Kabbabaa Hordofaa, Baga nagaan hidhaa cubbuu keessaa baate,Warri hafaniis akka hiikaman iyyannaan keenya itti fufa!
#Viidiyoon gabaabduun tun, Kibba Baha Oromiyaa Godina Arsii Ona Diksis gadda Barataa Oromoo Maashoo Umar kan tibba darbe yunivarsitii Goondaritti ajjeefame irratti kan waraabbamee dha.
Jaarsi haasawu kun miira keessa seenuun waan qabanii gadidhiisan dhaban. Akkaataan Maashoo maatiin itti guddifatee barsiifatee fi wareegamuu isaa irratti mirri maatii waan akkaan namatti dhagahamuu dha!